जेब्राक्रसमै जोगिन मुस्किल | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
काठमाडौं । सडकमा पहिलो हक कसको ? पैदलयात्रुको । संसारभर स्वीकृत मान्यता हो यो । नेपालका सडकमा भने पैदलयात्रु डराइडराइ हिँडेका र बाटो काटिरहेका भेटिन्छन् ।
पैदलयात्रुलाई बाटो काट्नैका लागि भनेर बनाइएका जेब्राक्रसिङमा समेत सवारी साधनले ठक्कर दिने र ज्यान लिने गरेको छ । पछिल्ला केही समयका घटना हेर्दा पैदलयात्रु जेब्रामै जोखिममा देखिन्छन् ।
सामाखुसी चोकमा पुस २३ सोमबार पैदलयात्रीको एउटा समूहलाई नै माइक्रोबसले ठक्कर दियो । बाटो काटिरहेकामध्ये ५५ वर्षीया सीता दाहालको मृत्यु भयो । उनको टाउकोमा चोट लागेको अल नेपाल अस्पतालका आकस्मिक कक्षका चिकित्सक अनिल सुवेदीको भनाइ छ। अन्य चारमध्ये एक जनालाई ग्रान्डी लगियो र एक जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइन् । दुई जना अझै अस्पतालमा छन् ।
सोमबार माइक्रोले हानेको समूहमा अल नेपाल अस्पतालमै ‘प्राक्टिकल’ गर्दै गरेकी १९ वर्षीया सपना राई पनि थिइन्।
उनका अनुसार सडकमा एउटा बस रोकिराखिएको थियो। निकै पछाडि एउटा माइक्रो थियो। ‘हात देखाएर बाटो काटदै थियौं । पर रहेको माइक्रोले बसलाई ओभरटेक गरेर हुत्तिँदै आएर हान्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि के भयो मलाई याद छैन । टाउकोमा चोट लागेर बेहोस थिएँ, आफैंले प्राक्टिकल गर्ने अस्पतालमा आँखा खुल्यो ।’ उनी उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकिन् ।
अर्का घाइते सुशील अधिकारीले भने, ‘हानेर लडाएपछि मेरो खुट्टामाथि नै चढाएको हो कि के गरी चलायो मलाई याद छैन ।’ घाइते दुई जना ५३ वर्षीय सुशील र ५० वर्षकी सरिता अधिकारी श्रीमान–श्रीमती हुन् । सुशीलको खुट्टामा चोट लागेकाले सुन्निएको छ । डाक्टर सुवेदीका अनुसार उनको देब्रे कुर्कुच्चामा चोट लागेको छ । नसा तन्केकाले भर्ना गरिएको छ ।
सरिता भने माइक्रोले हानेर ढलेपछि पनि चालकले आफूहरू माथि नै गाडी चढाउन खाजेको बताइन्। ‘लडेपछि जीउमाथि नै चढाउन खोजेको थियो । म पछाडि सरेँ, मेरो तिघ्रामाथिबाट माइक्रो गयो,’ उनले भनिन्, ‘ड्राइभरले जानीजानी मार्नै लागेको थियो ।’
यो पनि पढ्नुहोस मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी
चिकित्सकले सरिताको अवस्था स्थिर भए पनि खतरामुक्त भने नरहेको बताए । उनको देब्रे साँप्राको हड्डी भाँच्चिएको छ। ‘पक्षघातको डर पनि छ । तिघ्राको मासु मर्न सक्छ । अहिले जोखिममुक्त भन्न मिल्दैन,’ डा. सुवेदीले भने ।
अर्की घाइते लक्ष्मी सापकोटा ग्रान्डी अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा छिन् । कुरुवा बसेका उनका छोरा विशाल सापकोटाले भने, ‘बुधबार बिहानसम्म थोरै बोल्नुहुन्थ्यो, दिउँसोबाट बोल्न नसक्ने भएर भेन्टिलेटरमा राखिएको छ । बोल्न सक्ने बेला के भएको हो भनेर सोध्न सकेनौं ।’ विशालका अनुसार लक्ष्मीको फोक्सोमा चोटका कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या आइरहेको छ ।
पूर्वगृह सचिव पद्मराज सुवेदीको जेब्राक्रसबाट बाटो काट्ने क्रममा मृत्यु भएको थियो । गत वर्ष वैशाख ११ गते अनामनगरमा बाटो काटदै गर्दा ८० वर्षीय सुवेदीलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो । टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि उपचार क्रममा उनको ज्यान गयो ।
त्यसको करिब एक महिनापछि जेठमा जेब्राक्रसमै बसले ठक्कर दिँदा सुनसरीकी २३ वर्षीया रविना चौधरीको ज्यान गयो । सुकेधारा बस्ने र वसुन्धारास्थित एक निजी विद्यालयमा पढाउने उनलाई पढाउन गइरहेकै बेला जेब्राक्रसमा बसले ठक्कर दिएको थियो । वीरगन्ज–काठमाडौं रुटमा चल्ने रात्रिबसले ठक्कर दिएपछि उनको मृत्यु भएको हो । घटनामा ना४ख ४२६२ नम्बरको गाडीका चालक बारा निजगढका २५ वर्षीय विनय तामाङ पक्राउ परेका थिए । गाडी तीव्र गतिमा रहेको प्रहरीको भनाइ छ । महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तले उनीमाथि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ को (२) अनुसार कारबाहीको माग गरेको थियो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा चालकको नियतअनुसार सजाय तोकिएको छ। ऐनको दफा १६१ मा ज्यान मार्ने नियत नभए पनि दुर्घटनामा मृत्यु भएको खण्डमा १ वर्ष कैद २ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यसैगरी नियतवश किचेर वा सवारी साधन ठोक्काएर ज्यान लिएको देखिएमा सवारी चालक प्रमाणपत्र लिएकाको हकमा दुई वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
यो पनि पढ्नुहोस श्रीमानको लिङ्ग सानो भएको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद
जेब्राक्रस : छ कि छैन ?
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कतिपय व्यस्त सकडमा जेब्राक्रस भएरनभएको थाहा हुँदैन । कतै पेन्ट उडेको त कतै सडक भत्किएको र धुलोका कारण जेब्राक्रस पुरिएका छन् । कतै चोकका छेउछाउका जेब्राक्रस निमिटयान्नै पारिएका छन् । जेब्रामा टयाक्सी र माइक्रो रोकिराखिएका भेटिन्छन् ।
२८,पुष.२०७५,शनिबार २१:३० मा प्रकाशित
← नेपालकै पहिलो नमुना त्रिकोणात्मक झोलुङ्गे पुल निर्माणमा अलपत्र
नेपालमा पहिलोपल्ट कलेजोको वरिपरी पलाएको पाँच किलो ट्युमर झिकियो →